१२ बजे राति चि,हान खन्ने झाक्रीले यी युवतीलाई यस्तो सम्म गरे, धुरु धुरु रोइन युवती, आखिर किन रोइन चेली ? (भिडियो सहित) - दैनिक नेपाल न्युज
१२ बजे राति चि,हान खन्ने झाक्रीले यी युवतीलाई यस्तो सम्म गरे, धुरु धुरु रोइन युवती, आखिर किन रोइन चेली ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित द्वारा: साेमबार, बैशाख २०, २०७८
काठमाण्डौ । आजभन्दा ६ वर्ष पहिले मृत्यु भएका जीवन राई अझैं जीवित भएको कुरा अहिले बाहीरिएको छ । यो कुरा बाहीरिएसंगै पुरै गाउँ नै त्रसित बनेको छ । जीवन राईको मृत्युपछि उक्त गाउँमा मानिसहरुको अचानक मृत्यु हुने । बिरामी हुने क्रम बढ्दै गएको कुरा गाउँलेहरुले नोटिस गरेपछि सबैको सहमतिमा झाँक्रि बसालिएको रहेछ ।
उक्त झाँक्रिले जीवन राई अझैं पनि जीवित नै भएको र जीवनले नै गाउँमा सबैलाई दुःख दिएको कुरा प्रमाणीत गरिदिएपछि अहिले उक्त गाउँका सबै स्थानियहरु चिन्तामा परेका छन् ।
विज्ञानले प्रमाणीत गर्न नसकेको कुरा झाँक्रिले प्रमाणित गरिदिएपछि अहिले सबै गाउँलेहरुले धामी झाँक्रिको विश्वास गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सबैले आफुले सक्ने कुराहरु उठाएर धामी झाँक्रिलाई दिनकोलागी एक जुट भएका छन् ।
धामीको कुरामा विश्वास गरेका गाउँलेहरुले धामीकै भनाईमा लागेर ६ वर्ष पहिले जीवनलाई गा’डेको ठाउँमा गएर उनको चिहान खने । जब गाउँलेहरुले धामीको भनाई अनुसार चिहान खने उनीहरुले पत्याउनै नसक्ने कुरा उक्त चिहानमा भेटे ।
एकजना स्थानियको भनाई अनुसार जब गाउँलेहरुले चिहान खने तब त्याहाँ ६ वर्ष पहिले मरिसकेका जीवनको कम्मरको भाग जस्ताको त्यस्तै भेटे । त्यो कुरा देखेर सबै गाउँलेहरु नै डराउनुका साथै अ’चम्मित पनि भए ।
आखिर मरिसकेका जीवनले किन अहिलेसम्म गाउँलेहरुलाई दख्ख दिईरहेका रहेछन् त भन्ने कुरा गाउँहरुले झाँक्रिको सहयोगमा जब बुझे तब उनीहरुको हो’स नै उ’ड्यो । वास्तवमा यो कारणले मृतक जीवनले पुरै गाउँलाई नै दुःख दिएका रहेछन् ।
झापामा नयाँ नियम लागू, प्रहरीले प्रहरीलाई नै गरे यस्तो कडा कारबाही, प्रहरीमाथी रिस पोख्दा, पर्यो चर्काचर्की (भिडियो सहित)